एउटै अस्ट्रिचको मूल्य ६० हजार, १९ बिघा जमिनमा ५ हजार दुई अस्ट्रिच, एक अर्ब बढीको लगानी - Himali Patrika
एउटै अस्ट्रिचको मूल्य ६० हजार, १९ बिघा जमिनमा ५ हजार दुई अस्ट्रिच, एक अर्ब बढीको लगानी
हिमाली पत्रिका १३ चैत्र २०७७, 8:46 pm
नेपालीका लागि अनौठो चरा ‘अस्ट्रिच’ पहिलोपटक भित्र्याएर ठूलो कृषि व्यवसाय गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ बुटवलका सीपी शर्मा । कसैले सम्भावना नदेखेको र हात नहालेको व्यवसाय सुरु गर्न उक्त चरालाई उहाँले अस्ट्रेलिया र अमेरिकाबाट नेपाल भित्र्याउनुभएको हो । रुसमा अध्ययन गर्न जानुभएका उहाँ उतैबाट युक्रेनको भ्रमणमा जाँदा त्यो चरालाई पहिलोपटक देखेको बताउनुहुन्छ । त्यही समयदेखि यसलाई नेपालमा भित्र्याएर व्यावसायिक पालन गर्ने उहाँमा हुटहुटी चल्यो । बिल्कुल नौलो व्यवसायमा झन्डै एक अर्ब लगानीको जोखिम मोलेर सन्तुष्टि लिइरहेका शर्मासँग अस्ट्रिच कथा र कोरोना प्रभावबारे केन्द्रित रहेर गोरखापत्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक दीपक ज्ञवालीले गर्नुभएको पृथक् वार्ता :
तपाईं कोरोना सङ्क्रमण भएर पनि मुक्त हुुनुभएछ । बधाई छ ! अनि तपाइका अस्ट्रिचलाई चाहिँ कस्तो छ ?
धन्यवाद ! म सङ्क्रमणको धेरै दिनपछि निको भएँ । अहिले पूर्ण स्वस्थ भएको छु । मेरा चरा पनि स्वस्थ्य छन् तर कोरोनाकै कारण तीमध्ये धेरै बूढा भए । ती बूढा हुँदा म भने चौपट भएँ ।
कोरोना त्रासपछिको यो अवधिमा अस्ट्रिचको मासु बिक्ने ठाउँ नै भएन । जसका कारण काट्ने उमेर पुगेका चरा काट्न सकिएन । काट्ने उमेर पुगेका झन्डै तीन हजार चरा बूढा भए । ती स्वस्थ त छन् तर मेरो खर्च बढिरहेको छ ।
किन खर्च बढ्छ र ?
लौ… यो झन्डै एक वर्षमा तिनले कति दाना खाए ? एउटाले मात्रै एक दिनमा दुई सय रुपियाँको दाना खान्छ । अरू कुराको हिसाब नगरौँ, तीन हजार बूढा चराले मात्रै वर्षमा कति रुपियाँको दाना खाए होलान् ? अर्को कुरा, काट्ने उमेर पुगेका चरा जति वर्ष पाले पनि मासु खासै बढ्दैन । मासु चाहिँ स्वस्थ नै हुन्छ । एउटा चरा मात्र पनि डेढ सय किलोको हुन्छ । भन्नुस् त त्यत्रा चरा नबिकेपछि के भयो होला ?
भनेपछि कोरोना कहरमा तपाईंको व्यवसाय पनि अति प्रभावित भयो ?
किन नहुनु नि ? धेरै प्रभावित भयो । हाम्रो पर्यटन केन्द्रित कृषि व्यवसाय हो । अस्ट्रिचको मासु बढी बिक्री हुने भनेकै पर्यटकीय क्षेत्र, ठूला होटल, विवाह, भोजभतेर र उत्सव हुन् । ती सबै ठप्प भएपछि कहाँबाट मासु खपत हुनु ?
अब त केही सुधार भएको होला ?
सुधार हुन थालेको छ तर पुरानै लयमा फर्किन त धेरै वर्ष कुर्नुपर्छ ।
कति पर्छ यो चराको मासुलाई प्रतिकिलो ?
फरकफरक मूल्य तोकेका छौँ । जस्तै, खुद्रा, हाडसहितकोलाई किलोको एक हजार ४५०, हाडबिनाको एक हजार ९५० र विशेष प्रकृतिको मासु खासगरी स्टार होटल र विशेष पर्यटकीय क्षेत्रका लागि दुई हजार ५०० मा बिक्री गर्दै आएका छौँ ।
अनि कसैले जिउँदै, सिङ्गै किन्न चाह्यो भने ?
कसैले सोखका लागि एकाध किन्न चाहन्छ भने एउटाको ६० हजार पर्छ । व्यावसायिक पालनका लागि किन्ने हो भने ४० हजार । यस्तो मूल्य चल्लाको हो ।
किनेका छन् त कसैले ?
किन नकिन्नु ? लकडाउनअघि त राम्रै बिक्री हुन्थ्यो जिउँदो पनि । हामीबाटै बिक्री भएर अहिलेसम्म देशका झन्डै ५० ठाउँमा पुगेका छन् यी चरा ।
कति छन् तपाईंको फार्ममा ?
अहिले पाँच हजार दुई सयवटा छन् । मैले अघि नै भनिसकेँ, तीमध्ये तीन हजारवटा पहिले नै काटिसक्नुपर्ने थिए ।
त्यति धेरैलाई पाल्ने जग्गा चाहिँ कति छ नि ?
अहिले १९ बिघा क्षेत्रफलमा चरालाई पालिएको छ । त्यो जग्गा कम्पनीको हो । केही जग्गा भाडामा पनि छ ।
कति भयो अहिलेसम्म लगानी ?
एक अर्ब भन्दा बढी रुपियाँ । प्रालि हो, दुई जना छौँ ।
तपाईं त अस्ट्रिचलाई नेपालमा भित्र्याउने पहिलो मान्छे । किन यस्तो जोखिम मोल्नुभएको ?
हो, यो चरा मैले नै नेपाल भित्र्याएको हुँ । फरक क्षेत्रमा लगानी गरेर फरक आनन्दसाथ निर्यातको सम्भावना र सफल हुने देखेर यस्तो सुरुवात गरेको हुँ ।
कहिले ? कहाँबाट ? कति भित्र्याउनुभयो सुरुमा ?
२०६५ सालमा अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट । सुरुमा एक हजार ५०० अण्डा र एक हजार चरा ल्याएका थियौँ ।
कहाँ देख्नुभएको थियो पहिलोपटक ?
युक्रेनमा पहिलोपटक देखेको हुँ सन् १९९२ तिर । त्यतिबेला म रुसमा अध्ययन गर्थें । त्यतैबाट भ्रमणका सिलसिलामा जाँदा देखेपछि यी चराबारे धेरै सोच्न थालेँ । नेपालमा पालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गरेँ ।
यसको ठूलो विशेषता के हो ?
यसका विशेषता धेरै छन् । यो गाडीभन्दा छिटो दौडिन सक्छ तर हामीले यहाँ यसको प्रयोजन यसका शरीरका अङ्गहरूको प्रयोग र बिक्री वितरण हो । जस्तै, मासु, अण्डा, प्वाँख, छाला, हाडलगायतका अङ्गबाट बहुमूल्य सामग्री पनि बनाउन सकिन्छ । हामीले त्यस्ता सामग्री निर्माण गर्दै पनि आएका छौँ । जसप्रति देश विदेशमा निकै माग र आकर्षण छ ।
कस्तो छ दैनिकी ?
म हरपल प्यारा चरासँगै हुन्छु । तिनीहरूको स्याहारसुसार र उनीहरूसँगै हुँदा अति आनन्द लाग्छ । साहै्रै रमाइलो लाग्छ, मनमा शान्ति हुन्छ ।
कृषि क्षेत्रको अझ उन्नति र प्रवद्र्धनका लागि के गर्नुपर्ला ?
पछिल्लोपटक केही सकारात्मक अभ्यास सुरु भएका छन् । समीक्षा गर्दा के पाउँछु भने मैले गाडी ७ देखि ८ प्रतिशत ब्याज दरको ऋणमा पाउँछु तर कृषि फार्मका लागि १२ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । नयाँ नीतिका लागि बहस जरुरी छ । मलाई लाग्छ, नगद अनुदान गलत हो । बरु सुविधामा जोड दिनुपर्छ । जस्तो, कृृृषि उपकरण, लगानीमा ब्याज दर, उत्पादित वस्तुको बजार प्रवद्र्धनलगायत । व्यावसयिक कृषिलाई जोड दिने हो भने जमिनको हदबन्दीबारे पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।
कतिलाई रोजगारी दिनुभएको छ ?
प्रत्यक्ष २५६ जनाले रोजगारी पाउनुभएको छ, अप्रत्यक्ष त झन् धेरैले ।
मंसिर २८, २०७७ गोरखापत्र अनलाइनमा प्रकाशित समाचार